FAMOKARANA RONONO : Mbola tsy mamaly ny filàn’ny tsena anatiny eto Madagasikara
Vokatry ny filàna fototra ho an’ireo orinasa sy ny filàna eo amin’ny andavanandrom-piainan’ny olona dia manao famokarana ronono efa an-taonany maro ny Malagasy. 3 octobre 2017
Ny ronona dia anisany manana ny lanjany eo amin’ny toekaren’ny firenena. Nandritra ny fanamarihana ny faha-45 taonan’ny Fifamanor izay notanterahina tao Vakinankaratra ny herinandra lasa teo àry dia tsapa fa tena mbola ambany ny taham-pamokarana ronono eto Madagasikara. Amin’ny ankapobeny dia any amin’ireo firenena manana toe-tany mangatsiaka, tsy ahitana hafanana ambony no ahitana ny vokatra ronono.
Ny anton’izany, araka ny fantatra, dia maha mety ny fiompiana ireo biby fiompy ny tany mangatsiaka ka ahafahana mahazo ny taha ilaina amin’ny vokatra ronono, indrindra ny omby izay mitana ny laharana voalohany amin’ny fahazoana ronono. Tsindriana etoana fa raha io vokatra io no resahana dia ireo izay azo avy amin’ny biby fiompy fihinana no voakasika amin’izany avy hatrany. Tsara ho fantatra fa anisany vokatra sarobidy ny ronono ary misy mihitsy ireo milaza fa volamena fotsy izany vokatra izany noho ny fihazonany ny lanja ara-toekarena lehibe eo amin’ireo mpandraharaha misehatra aminy. Ankoatra ny maha vokatra azo ahodina ny ronono dia ny fanjifana azy mivantana ho sakafo ilaina amin’ny fiainana andavanandro no tena ilàna azy. Raha ny tarehimarika nivoaka tamin’ny taona 2011 teo dia manodidina ny 15 ka hatramin’ny 20 litatra isan-taona ny fandaniana ronono ankapobeny ho an’ny olona tsirairay maneran-tany. Misy anefa ireo firenena sasany izay mihoatra lavitra io tarehimarika io no jifainy ka mampiakatra ny tinady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Efa misy ireo omby nohatsaraina
Hatreto dia ny vokatra ronono avy amin’ny omby no mbola mitana ny laharana voalohany ny fanjifana azy maneran-tany, na eo aza ny ronono azo avy amin’ny biby fiompy hafa, toy ny ondry sy ny osy. Efa misy ireo karazana omby aparitaky ny mpikaroka mba hampitomboina ny vokatra maneran-tany. Tsy mihoatra ny 2 na 3 litatra isan’andro mantsy ny vokatra azo avy amin’ny omby mpanome ronono tsotra, raha ny zava-misy eto Madagasikara no resahana.
Izany hoe ampahafolon’ny filan’ny olona no vokatra azo raha mijanona amin’io fomba famokarana voajanahary io. Noho izany dia miakatra ny saran’ireo karazan’omby vaventy izay novokarin’ny mpikaroka io mba hahazoana mampitombo ny vokatra. Raha ho an’i Madagasikara manokana dia vidiana amina an-tapitrisany ny zanak’omby nohatsaraina iray tonga eto amintsika. Ity farany izay hahazoana 7 hatramin’ny 10 litatra isanandro raha be indrindra.
Manoloana izany dia tsy maintsy vondrona tantsaha no manafatra izany fa tsy olona iray, noho ny vidiny lafo dia lafo. Vokany, mbola tena ambany ny tahan’ny fisotroana ronono eto Madagasikara noho izay famokarana tsy ampy izay.
Mbola manafatra 20 litatra isan-taona
Tsara ho fantatra fa mbola manafatra ronono manodidina ny 20 tapitrisa litatra isan-taona i Madagasikara hanampiana ny vokatra avy eto an-toerana. Marihana mantsy fa tsy mbola maharakotra ny tsena anatiny ny vokatra vokarin’ireo tantsaha ny avy any amin’ireo faritra telo mpamokatra eto amintsika, dia ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinankaratra. Tsara ihany koa ny manamarika fa vovon-dronono no afarana tonga eto amintsika fa tsy ronono tahaka ny mahazatra.
Afaka mameno ny filàna anatiny kosa anefa ireo tantsaha, araka ny fanazavana nandritra ny fanamarihana ny andro ho an’ny ronono, saingy maro ireo sakana tsy ahatanterahana izany. Anisan’izany ny fahalafosan’ny kojakoja amin’ny fikarakarana ireo omby toy ny sakafo, ny ara-pahasalamana, ny fampitomboan-taranaka, ary ireo fitaovana iotazana ny vokatra izay fepetra takian’ny tsena.